India: Gazety Ao An-toerana Vokarim-Behivavy · Global Voices teny Malagasy
India: Gazety Ao An-toerana Vokarim-Behivavy
Voadika ny 22 Jolay 2014 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Français, Español, Ελληνικά, Português, srpski, नेपाली, English
Mpamaky gazety. Sary : Yashas Chandra
Ahoana no hiresahana ireo vehivavy any amin'ny faritra ambanivohitr'i India? Manao gazety tena mahasarika avy ao an-toerana no hevitra tsara hanombohana azy.
Gazety iray soratam-behivavy ary mpiseho isan-kerinandro any ambanivohitra ny Khabar Lahariya, mivoaka amin'ny fiteny Awadhi, Bajjika, Bhojuri, sy Bundeli amin'ireo fanjakàna indiana any Uttar Pradesh sy Bihar. Miisa 80 000 ny gazety zaraina aminà tanàna 600.
Mametraka ny tenany ho toy ny “mpandefa fanairana” sy “fitaovam-piadian'ny osa” izy amin'ny fiampangàna ireo tsy rariny sy ny kolikoly izay mikiky ny vondrom-piarahamonina any ambanivohitra sy zara raha takatry ny fampitàm-baovao amin'ny fotoana ara-dalàna. Natomboka tamin'ny 2002 ary efa misy dika natao ho an'ny ety anaty aterineto ny Khabar Laharia nanomboka tamin'ny Febroary 2013.
Isan-taona ny fampielezampeo Alemàna Deutsche Welle dia mikarakara fifaninanana hijerena izay bilaogy tsara indrindra tao anatin'ny roambinofolo volana farany. Tamin'ity taona ity, lasan'ny Khabar Laharia ny loka Global Media Forum Award. Ilay vehivavy mpibilaogy sady mpitsara tamin'ny fifaninanana dia namaritra io bilaogy io ho toy ny “fanehoana tsara ny filàn'ny demaokrasia iray efa mihodina ny hanome fahafahana ny rehetra hahazo vaovao.”
Mba hahafantarana tsara ny tantaran-dry zareo, dia nifampitafa tamin'i Poorvi Bhargava, mpandrindra ny famoahana ao amin'ny Khabar Laharia izahay.
Mpamaky iray mitàna gazety Khabar Laharia any aminà tanàna iray. Sary : Yashas Chandra
Rising Voices (RV): Nahoana ny Khabar Lahariya, izay midika hoe “Onjam-Baovao” amin'ny fiteny Anglisy no nofidiana?
Poori Bhargava (PB): Ny ampahany betsaka amin'ny maha-izy azy ny Khabar Lahariya, na ny anarany aza, dia avy amin'ireo vehivavy mpanangom-baovao. Ny marina, ilay anarana,dia nivoaka avy aminà fiaraha-miofana faobe nataonay tamin'ny 2002 rehefa niara-nipetraka tamin'ny andiany voalohany tamin'ireo vehivavy mpanangona vaovao ireo mpikambana mpanorina. Ireo vehivavy avy any am-bohitra no naniry hanome azy anarana iray mahazatra ny mpamaky, tsotra, ary midika zavatra ho azy ireo.
RV: Mpirotsaka an-tsitrapo daholo ve ny ao anatin'ny tarika ?
PB: Tsia, tsia. Mpiasa amin'ny ora feno ho an'ny Khabar Lahariya ireo vehivavy ireo. Ho an'ny betsaka, lasa loharanom-bola io, izay azon-dry zareo ampiasaina araka ny itiavany azy, na ho fanampin'ny vola miditra ahafahany manatsara ny fari-piainany, ho azy vehivavy sy ho an'ny ankohonany.
RV: Misy lehilahy ve ao anatin'ny tarikareo ?
PB: Tsia, tsy misy.
RV: olona firy no mitantana io tetikasa io?
PB: Niantomboka toy ny hoe habaka iray noforonin'ny vehivavy ho azy ireo izy io, ary dia nijanona ho izay. Tao anatinà vanim-potoana iray naha-navesa-danja ny fikarohana habaka sy fanetsiketsehana ho an-ny vehivavy no niainga ny zavatra rehetra. Ary, eny, misy vehivavy 40, miparitaka aminà fanjakàna roa, izay vehivavy avy any ambanivohitra daholo, ary ny ankamaroany dia avy aminà vondrom-piarahamonina natao an-jorom-bàla.
Ireo vehivavy 40 ao anatin'ny tariky ny Khabar Lahariya. Sary : Poorvi Bhargava
RV: Tany am-piandohana dia zara raha nahay namaky teny sy nanoratra ny sasany tamin'ireo mpifarimbona, ary ankehitriny dia mpanao gazety izy ireny. Sarotra ve ny dingan'ny fanofànana ?
PB: […] Samihafa ny haavon'ny fahalalan'ireo vehivavy ireo. Ny sasany manana ny fahalalàna fototra nefa tsy nanaraka fianarana ara-dalàna. Ny sasany indray nisoratra tany amin'ireo fandaharam-panabeazana. Nahaliana ny zava-niainana, fianarana ho anay rehetra ihany koa, satria be ny zavatra nianaranay avy amin-dry zareo. […]
RV: Naka endrika sy fomba fanao manokana ve ianareo ho an'ireo mpamakinareo, izay miaina koa any amin'ny faritra ambanivohitra no sady mety tsy nandia fampianarana akory? Ahoana ny fomba fifampiresahanareo aminy?
PB: Tsy sarotra ny fomba ataon'ny Khabar Lahariya, samihafa fotsiny. Avoaka amin'ny fiteny ao amin'ilay faritra ny tsirairay amin'ireo famoahana enina (antsoin'ny olona amin'ny hoe ‘tenim-paritra’, saingy izahay kosa misafidy ny hitazona ny hoe ‘fiteny’). Ny sasany amin'ireny fiteny ireny no tsy ampiasaina intsony eo amin'ny fanoratana ankehitriny, noho izany, (ny fiteny anontàna ilay gazety) izay tsy mitsahatra tenenin'ireo vehivavy mpamoaka lahatsoratra dia takatr'ireo vitsy an'isa mampiasa ilay fiteny any amin'ilay faritra. Ahafahana mitahiry ilay fiteny ihany koa izany, raha tsy izany dia ho fongana/maty. Satria mora ilay fiteny, ary manana endrika samihafa mahazatra isehoany ny gazety (tarehin-tsoratra lehibe kokoa, misy famaritana mba hampanan-karena ilay vanim-potoana iresahana olana saro-bahàna) , vakiteny mahafinaritra io ho an'ireo vahoaka tanttsaha mahantra izay efa ela no mety tsy nandeha intsony tany an-tsekoly.
Fizaràna ny gazety. Sary : Khabar Lahariya
RV: Afaka milaza aminay misimisy kokoa mikasika ny fanapahan-kevitrareo hamoaka dika amin'izy io ety anaty aterineto ve ianareo? Ahoana no nahafahana nanatanteraka azy?
PB: Tamin'ny 2012, nahazo famatsiana vola nandritry ny roa taona avy amin'ny United Nations Democratic Fund (UNDEF) izahay. Io no fotoana nivadihan'ny Khabar Lahariya avy amin'ny fivoahana taminà fiteny telo ho amin'ny enina samihafa. Tafiditra tamin'ny hetsika notohanan'ny UNDEF ara-bola ny famoahana ny votoatin'ny Khabar Lahariya ho ety anaty aterineto. Naniry tokoa ny hametraka ny fisianay ety anaty aterineto izahay tamin'ny fotoana nahitànay fa marobe amin'ny olona (indrindra fa ny tanora) no miditra aterineto amin'ny alàlan'ny findainy, eny fa na tany amin'ireo vohitra niasànay aza.
Nirianay ihany koa ny hanàna fahafahana mamoaka izany ao amin'ny aterineto ireo mpanoratra lahatsoratra, toy ny famoahany izany ho amin'ny taratasy ihany. Araka izany dia nanomboka fiofanana niarahana taminà vondrom-behivavy iray izahay, mba hifehezana ny aterineto ankoatry ny mailaka sy ny Google […] Amin'izao fotoana izao, miezaka ny manitatra sy mampitombo ny isan'ny mpamakinay izahay any an-toerana (any amin'ireo faritra lavitra sy ambanivohitra). Voalohany indrindra, nahita toerana ety anaty aterineto ireny fiteny ireny (Bundeli, Awadhi), ary ny dikanteny amin'ny fiteny Anglisy dia mitondra ireo faritra iasànay sy ny olan'izy ireny ho takatr'ireo mpisera anaty aterineto, afaka mamaky azy ireny daholo ny olona rehetra.
Khabar Lahariya. Sary : Yashbas Chandra
RV: Amin'ny teny fohy, inona no azonao ambara mikasika ny teknolojia sy ny fanaovana izay haha-mahaleotena ny vehivavy raha apetraka ao anatin'ny vanim-potoana misy ny Khabar Lahariya?
Mamaky Khabar Laharia. Sary : Khabar Laharia.
PB Ny teknolojia dia iray amin'ireo sehatra (toy ny kianja ho an'ny daholobe, amin'ny lafiny maro), izay voafetra ny fahafahana miditra aminy ho an'ny vehivavy. Raha asa tsy misy hevitra raiki-tampisaka ary tokony ho ampianarina ny vehivavy ny asa fanaovana gazety, dia toy izany koa ny fidirana amin'ny teknolojia.
Lasa fitaovana manana anjara toerana be hahafahana mahazo vaovao ny teknolojia, ny vaovao izay avy eo indray misy fiantraikany mivantana amin'ny fahalalàna sy ny fahafantarana ny zon'ny tena. Mifampiankina mivantana amin'ny fizakantenan'ny vehivavy ny teknolojia eny an-tànan-dry zareo. Na ao anatin'ny vanim-potoana isian'ny Khabar Laharia aza, hitanay tao anatin'ireo taona voalohany nanombohana fa tena fanamby lehibe ny hitarika ny vehivavy ho eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ka hanao gazety, asa iray izay ametrahan'ny vehivavy fanontaniana sy itakiany valiny.
Iray hafa amin'ireny faribolan'ny sehatra ho an'ny daholobe ireny ny aterineto amin'izao andro izao […] izay tokony hisy feon'ny vehivavy.
Io no ezahan'ny Khabar Lahariya atao : mametraka tahirim-pahalalàna sy vaovao ary manampy bebe kokoa ny vehivavy ho afaka miditra amin'izy ireny.
Azonao atao ny manaraka ny vaovao farany avy amin'ny Khabar Lahariya’ ato amin'ny aterineto na makà vaovao momba ny asan-dry zareo ao amin'ny Facebook sy Twitter (@KabarLahariya). Nahazoana alàlana avy amin'ny Khabar Laharia avokoa ny sary navoaka teto.
Tantaran'ny Media sy Fanoratan-gazety farany
4 andro izayKaraiba
1 andro izayKaraiba